DEG DEG:- Madaxweyne Gaas oo goordhaw ka dhoofay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Madaxweyne Gaas oo goordhaw ka dhoofay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal
Madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa goordhaw ka amba-baxay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal, isagoona u kicitamay dalka Isku-taga Imaaraadka Carabta.
Madaxweyne Gaas oo maanta furay kalfadhigii 38-aad ee baarlamaanka maamulka Puntland ayaa markii uu shirkaasi furay kadib si degdeg ah ugu dhoofay magaalada Dubai ee dalka Isku-taga Imaaraadka Carabta.
Ilaa iyo haatan wax faahfaahin dheeraad ah lagama bixin waxa uu yahay safarkaan deg deg ah ee soo galay madaxweyne Gaas, balse safarkiisa Imaaraadka ayaa imaanaya xilli ay haatan dalkaasi ku sugan yihiin madaxda kale ee maamul goboleedka dalka oo dhan.
Dhinaca kale, madaxweyne Gaas ayaa su’aalihii maanta lagu weydiiyay kalfadhigii 38-aad ee baarlamaanka Puntland, waxaa ugu badnaa safaradda faraha badan ee uu dibadda ku aado iyadoo maamulkiisa ay ka jiraan xaalado abaar iyo colaadeed.
Dhawaan ayay ahayd markii madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas uu socdaal ku tagay dalka Imaaraadka Carabta, isagoona sheegay inuu halkasi uu u aaday arrimo ku aadan xiriirka ka dhaxeeya maamulka Puntland iyo dalkaasi.